ပရိုတငျးဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အပငျထှကျပစ်စညျးမြား။ – SoShwe
Home/Health & Beauty/ပရိုတငျးဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အပငျထှကျပစ်စညျးမြား။
ပဲတှထေဲမှာလညျး အသားကဲ့သို့ ပရိုတငျးဓာတျတှကွှေယျဝစှာပါဝငျပွီး နစေ့ဉျလိုအပျတဲ့ သံဓာတျတှကေို ဖွညျ့ပေးရုံသာမက အမြှငျဓာတျတှကျေိုလညျး ပွနျလညျပွညျ့ဝစပေါတယျ။
ပရိုတငျးဓာတျနဲ့အတူ အမြှငျဓာတျပါ ကွှယျဝစှာပါဝငျပွီး တဈရကျ (၁၇) ဂရမျစားသုံးခွငျးဖွငျ့လညျး ပေါငျမုနျ့အခပျြရအေနညျးငယျ စားသုံးတဲ့အကြိုးကြေးဇူးကို ရရှိနိုငျပါတယျ။
ဗာဒံစဆေို့တာဟာ သငျဘယျနရောသှားသှား အလှယျတကူ ယူဆောငျသှားလို့ရတဲ့ စားစရာတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဗာဒံစထေဲ့တှငျ အမြှငျဓာတျ၊ ပရိုတငျးဓာတျ၊ အဆီဓာတျ၊ Vitamin E နဲ့ အခွားအားဟာရဖွဈစတေဲ့ဓာတျတှေ ကွှယျကွှယျဝဝပါဝငျပါတယျ။ ထို့နောကျ ဗာဒံစကေို့လညျး အဆာပွေ အစားအစာအနနေဲ့ စားသုံးလို့ရပါသေးတယျ။
၄။ အာဟာရဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ တဆေး။
တဆေးမှာ ဒိနျခဲကဲ့သို့ အနံ့အရသာ ပါရှိသောကွောငျ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှေ ထုတျလုပျတဲ့နရောမှာ အမြားသုံး အသုံးပွုကွပါတယျ။ တဆေးကို အဝါရောငျ အမှုနျ့ (သို့) ပါးလှာတဲ့ အလှာပါးလေးတှအေနနေဲ့ ဝယျယူရရှိနိုငျပါတယျ။ တဆေး တဈအောငျစမှာ ပရိုတငျးဓာတျ (၁၄) ဂရမျပါဝငျပွီး အမြှငျဓာတျ၊ ဇငျ့နဲ့ မဂ်ဂနီဆီယမျဓာတျတှလညျး ကွှယျဝစှာ ပါဝငျပါတယျ။
မွပေဲထောပတျဟာ ဓာတျစာတဈခုဖွဈတယျဆိုတာကို သငျသိပါသလား ? ? ? မွပေဲထောပတျမှာဆိုရငျတော့ ပရိုတငျးဓာတျနဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ကောငျးမှနျစှာ ပေါငျးစပျပါဝငျပွီး ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှကေို အလှယျတကူ ရရှိနိုငျပါတယျ။ ထို့အပွငျ Vitamin E ၊ Vitamin B –6နဲ့ ပိုတကျဆီယမျဓာတျတှလေညျး အမွောကျအမွား ပါဝငျပါတယျ။
တို့ဟူးဟာဆိုရငျ ပရိုတငျးဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျပွီး မိမိစိတျတိုငျးကြ လုပျစားလို့ရတဲ့ အစားအစာတဈမြိုးလညျး ဖွဈပါတယျ။ တို့ဟူးကို ပဲစတှေ့ကေနေ ပွုလုပျပွီး အသားမစားတဲ့ သကျသကျလှတျသမားတှအေတှကျ ပရိုတငျးဓာတျတှေ ရရှိစအေောငျ ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
တကယျလို့သငျဟာ Diet လုပျနသေူတဈယောကျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ နစေ့ဉျအစားအစာထဲမှာ နှားနို့အစား ပဲနို့ကို ပွောငျးလဲ အစားထိုးသငျ့ပါတယျ။ ပဲနို့တဈခှကျမှာ ပရိုတငျးဓာတျ (၈)ဂရမျ ပါဝငျပွီး ကယျလျဆီယမျ၊ Vitamin D နဲ့ Vitamin B – 12 တို့ ကွှယျဝစှာ ပါဝငျပါတယျ။
ပဲတွေထဲမှာလည်း အသားကဲ့သို့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ သံဓာတ်တွေကို ဖြည့်ပေးရုံသာမက အမျှင်ဓာတ်တွေကိ်ိုလည်း ပြန်လည်ပြည့်ဝစေပါတယ်။
ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့အတူ အမျှင်ဓာတ်ပါ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး တစ်ရက် (၁၇) ဂရမ်စားသုံးခြင်းဖြင့်လည်း ပေါင်မုန့်အချပ်ရေအနည်းငယ် စားသုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗာဒံစေ့ဆိုတာဟာ သင်ဘယ်နေရာသွားသွား အလွယ်တကူ ယူဆောင်သွားလို့ရတဲ့ စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဗာဒံစေ့ထဲတွင် အမျှင်ဓာတ်၊ ပရိုတင်းဓာတ်၊ အဆီဓာတ်၊ Vitamin E နဲ့ အခြားအားဟာရဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေ ကြွယ်ကြွယ်ဝဝ ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့နောက် ဗာဒံစေ့ကိုလည်း အဆာပြေ အစားအစာအနေနဲ့ စားသုံးလို့ရပါသေးတယ်။
၄။ အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ တဆေး။
တဆေးမှာ ဒိန်ခဲကဲ့သို့ အနံ့အရသာ ပါရှိသောကြောင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အများသုံး အသုံးပြုကြပါတယ်။ တဆေးကို အဝါရောင်အမှုန့် (သို့) ပါးလွှာတဲ့ အလွှာပါးလေးတွေအနေနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ တဆေး တစ်အောင်စမှာ ပရိုတင်းဓာတ် (၁၄) ဂရမ်ပါဝင်ပြီး အမျှင်ဓာတ်၊ ဇင့်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်တွလည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
မြေပဲထောပတ်ဟာ ဓာတ်စာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား ? ? ? မြေပဲထောပတ်မှာဆိုရင်တော့ ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ ကောင်းမွန်စွာ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Vitamin E ၊ Vitamin B –6နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေလည်း အမြောက်အမြား ပါဝင်ပါတယ်။
တို့ဟူးဟာဆိုရင် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး မိမိစိတ်တိုင်းကျ လုပ်စားလို့ရတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တို့ဟူးကို ပဲစေ့တွေကနေ ပြုလုပ်ပြီး အသားမစားတဲ့ သက်သက်လွတ်သမားတွေအတွက် ပရိုတင်းဓာတ်တွေ ရရှိစေအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်ဟာ Diet လုပ်နေသူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်အစားအစာထဲမှာ နွားနို့အစား ပဲနို့ကို ပြောင်းလဲ အစားထိုးသင့်ပါတယ်။ ပဲနို့တစ်ခွက်မှာ ပရိုတင်းဓာတ် (၈)ဂရမ် ပါဝင်ပြီး ကယ်လ်ဆီယမ်၊ Vitamin D နဲ့ Vitamin B – 12 တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
Previous ထူးခွားဆနျးပွားတဲ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက တရားဥပဒမြေား။
Next ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ခြိနျးတှတေဲ့အခါမြိုးမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဘယျလိုပွငျဆငျမလဲ ? ? ?